Warbaahinta SEO iyo warbaahinta bulshada?
Saamaynta Warbaahinta Bulshada iyo habka ay u daadihinayso wareegga Mashruuca Optimization Search waxaa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah su'aalaha ugu murugsan. Waxaan ula jeedaa qarsoodiga sidaan oo kale: sida warbaahinta bulshada u saameeyso SEO? Miyay labadan mabaadi oo ku shaqeynaya isku-daba-marinta, ma aha mid idil, ama xitaa waxba ma aha?
Halkan waxa ku soo baxa bakhtiiye - jawaabta ugu gaaban waa haa, wuu qabanayaa. Laakiin waxay noqon kartaa mid sax ah oo la tixgelinayo tarjumaadda labaad, midda ballaadhan oo dhammeystiran. Aan la kulanno - warbaahinta bulshada dhab ahaantii waxay leedahay xiriir la leh SEO, laakiin miyay wadaagaan? Nasiib darro, waxaan dareemayaa in wax yar uun wax yaryar - warbaahinta bulshada ma laha, ugu yaraan fiicnaan, saameynta SEO. Waxa kaliya ee aan ka caawinaynin raadinta raadinta sida dadka intooda badan ay u rumaysan yihiin inay sidaas tahay.
Hoos waxaa ku jira inaan ku soo daro fikradaheyga qaar ka mid ah fikradaha qiimaha leh ee ay bixiyaan xubnaha kooxda Google lafteeda. Ugu horreyntii, aynu u qaadno sidii loo bixin lahaa - warshadaha raadinta aduunka ee dunidu marnaba wax caddayn ah uma baahna warbaahinta bulshada si ay u noqoto mid toos ah. Waxaan ula jeedaa, haa, warbaahinta bulshada ayaa weli ah habab macquul ah si aad u hesho muuqaal internetka oo wanaagsan oo ku saabsan mawduuca. Haa, ugu dambeyntii, waa wax walba oo ku saabsan SEO. Maxaan ka ogaan karnaa sida ay warbaahinta bulshada u saameynayso SEO? Iyadoo aan loo eegin jawaabta saxda ah ee suurtagalka ah, waxaa cad in warbaahinta bulshada ay dhab ahaantii ka caawin karto Your Search Engine Optimization ka shaqeeya guud ahaan. Laakiin wali waxaan la yaabanahay, miyuu raadin weyn u noqon doonaa calaamado bulsheed oo badan oo ku saabsan darajada hadda ee algorithm?
Waqti ahaan, algorithms raadinta Google marnaba lama shaacinin. Taasina waa sababta kaliya ee loo fahmi karo qaababka habdhaqanka ee raadinta Google ee baaritaanada ay eegayaan mid kasta oo kasta oo natiijada ka soo baxa imtixaanka dhabta ah ee nolosha. Ma qiyaasi kartaa, sida wakhtigeedu u shaqeynayo iyo xoogga shaqada ee cilmi-baaristu ay noqon karto? Haa, aan dib ugu soo noqnoqon karno. Sidee warbaahinta bulshada u saameeyaan SEO? Waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale qaadano warbaahinta bulshada oo kaliya wax kasta, laakiin maaha arrin toos ah oo ku jirta liiska, sida laga soo xigtay madaxda Google. Waa hagaag, xitaa sidaas, macnaheedu ma aha in dhammaan warbaahinta bulshada aysan wax saameyn ah ku laheyn qiimeynta dhammaan, sababtoo ah waxaa la isku dayay Google in warbaahinta bulshada lafteeda aysan u taaganayn heerka kaalinta.
Waxaan rumaysanahay in jawaabta saxda ah ee ka badan ama aan ka yareyn laga arki karo meel ku saabsan erayga "xidhiidhka. "Sida tan oo kale ereygan waxaa lagu sheegay macnaha ereyada soo celinta Calaamadaha Isudhinta ee White Paper oo ay bixiso Searchmetrics ee 2016. Waan hubaa in guys ay dhab ahaantii u dhaqaaqayaan wadada saxda ah. Sidaa daraadeed, jawaabta saxda ah ee ku saabsan sida warbaahinta bulshada ay u saameeyso SEO waxay noqotaa mid cad - haa, wuu qabanayaa. Hase yeeshee, weli wali ma jiraan xiriiro toos ah ama labo xiriir ah. Sidaa darteed, isha ku haynta samaynta dhiirigelinta adoo isticmaalaya qaabab kala duwan oo warbaahinta bulshada ah ayaa weli ah go'aan wanaagsan. Isla mar ahaantaana, Mashruuca Optimization wuxuu u baahan yahay dadaalkaaga iyo waqtigaaga si sax ah Source .